Ilanga kwiNdlu yesi-4: Libumba njani ikamva lakho kunye noBuntu - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Ilanga kwiNdlu yesi-4: Libumba njani ikamva lakho kunye noBuntu
Ilanga kwiNdlu yesi-4: Libumba njani ikamva lakho kunye noBuntu
Abantu abazalelwe kwiLanga kwindlu yesine kwitshathi yabo yokuzalwa banamathele kwikhaya labo kwaye baphupha ngobomi obuhle basekhaya obunokubenza bazive bekhuselekile. Yonke into abayenzayo ijolise ekuziseni ulonwabo kusapho lwabo kunye nokugcina amakhaya abo elungile.
Ubukho belanga apha bubonisa abemi abanolu fakelo banomdla kakhulu ekuhlonipheni izithethe abazichonga ngazo. Iqhayiya leendawo abasuka kuzo kunye nokukhula kwabo, indlela abazivelela ngayo kwaye benze izinto zenzeke kamva ebomini ziya kudibana kakhulu neenkumbulo zabo.
Ilanga kwi-4thIsishwankathelo sendlu:
Amandla: Ukunyaniseka, ukuthembeka kunye nokonwaba
Imiceli mngeni: Ukukhathazeka nokungaqiniseki
Ingcebiso: Akufanele bavumele nantoni na ibenze baphulukane nesidima sabo
Abantu abadumileyo: UJared Leto, uMarlon Brando, uPablo Picasso, uHalle Berry, uNikola Tesla.
Iyacotha kodwa iyasebenza
Abemi belanga abaneLanga kwi-4thIsicwangciso sendlu ubomi babo ngaphambili kwaye banomdla ekuphuhliseni izicwangciso zabo. Baye babe ngcono ngokuguga ngenxa yokuba isiqu sabo sokwenyani siza kubonakala njengoko bekhula.
Kubalulekile ukuba babe neemfuno zabo zeemvakalelo kunye nokuncamathiselwa kusonjululwe ngaphambi kokuba baqale ukunikela ingqalelo kwezinye izinto ebomini babo.
Nje ukuba ezi zinto zisungulwe, banokuqala ukugxila kwikhondo labo lomsebenzi kwaye balindele ukuba ubomi babo bube ngcono.
Ilanga lihlala lifuna ukukhanya, nokuba lithini na. Aba bantu baya kuchitha imali eninzi kwimeko entle kwaye bathande ukuba nabantu ngaphezulu okanye ukuqokelela kwigumbi lokuhlala kunye nosapho lwabo.
Ukuphosa amaqela ukuze abonise ifenitshala entsha kunye nendawo yomlilo yenye yezinto abazithandayo ukuzenza.
Ukuba banotata ophumayo kwaye imiba kwitshathi yabo yokuzalwa intle, baya kukufumanisa kulula ukutsala ukuchuma, kodwa abasoze bayeke ukukhathazeka ukuba izinto ebomini babo zinokujika ngendlela engeyiyo.
Banokuqalisa kancinci, kodwa kwakamsinya nje ukuba baqonde into ekufuneka beyenzile, baqala ukusebenza kakuhle kwaye bakwazi ukwenza izinto ngokukhawuleza.
Eyona nto ibalulekileyo ehlabathini kubo lusapho lwabo, ukuba banamathele kakhulu kubazali babo, nokuba ngaba le nto ibenzakalisile okanye ibadanisile.
Ilanga kwi-4thabantu bendlu bazenzela ubuqu babo ngokusekwe kwiimvakalelo kunye nendlela amalungu abo osapho abaziqonda ngayo. Kungenxa yoko le nto banokuphazamiseka luthando abalufumanayo kubantu abasondeleyo kubo.
Ngamaxesha onke baya kuba nexhala lokuba amaqabane abo obomi kunye nabantwana baya kubashiya okanye baphulukane nobomi obutofotofo ababuqhelileyo. Ezi zinto zihlala zibabeka umda, kodwa ukuvela ngakumbi kwazo kunokoyisa ezo ngxaki.
ukuhambelana kwendoda kunye nomfazi namhlanje
Ukukhula kwabo kubethelelwe ngamandla kwiingcambu zabo, ezingezizo ezinye izinto ngaphandle kwelifa labo, iindlela zookhokho, izithethe abazaziyo, ukukhuliswa kwabo kunye neenzame ezihlangeneyo ababebandakanyeka kuzo njengabantu abadala kunye nabantwana.
Ezi zinto zibenza bazive ngathi bangababo kwaye banokhuseleko oluyimfuneko. Indlela yabo ekukhanyeni ixhomekeke kakhulu kwindlela abadibanise ngayo iingcambu zabo kwindlela yabo yobomi.
Abantu abakulo mzabalazo wokubekwa ukuze babe nosapho kunye nekhaya elihle. Eyona njongo yeLanga labo kukusombulula iingxaki ezifihlwe kwizangqondo zabo kwaye ezineengcambu kobu buntwana babemi.
Bazithembile kwaye bonwabile xa bekhathalela amakhaya abo ngeyona ndlela banakho. Ubomi bosapho obutyebileyo kunye nokuba nomntu wokondla kubenza baphumelele.
Yonke into ngembali, ubomi bomntu kunye nobentsapho, iimvakalelo kunye namava anomdla abenza babenomdla. Bayiyo uhlobo lwemibongo oluthanda ukuhlala ngaphakathi kwaye lubukele imovie yothando.
Njengoko kushiwo ngaphambili, Ilanga ngo-4thAbemi bendlu babeka usapho kwindawo yokuqala, befuna ukudibana nomntu okhethekileyo kwaye babe nabantwana kuba yile nto ibakhuthazayo, kunye nesidingo sokubeka iingcambu.
Nangona kunjalo, amaphupha abo anokuzaliseka kamva ebomini, xa beya kusebenzisa onke amandla aqokelelwe kwithuba elingaphambili. Ikhaya elihle kunye nosapho oluhle kunye nokuhlonipha uninzi lwezithethe abazaziyo zibenza bazive bekhuselekile.
Kwaye ukhuseleko lubaluleke kakhulu kubo kuba kuphela xa beziva bekhuselekile apho banokuchaza khona iimvakalelo zabo kunye nokusebenza ngokusemandleni abo.
uphawu lwe zodiac lwangoDisemba 24
Xa bengaziva ngathi banayo, baya ekhaya kwaye bazame ukuqokelela imikhosi yabo. Indawo yeLanga kwi-4thIndlu ityhila inyani yokuba ngaphandle kokhuseleko, ngekhe bavele nangayiphi na indlela.
Nokuba injani na imeko, baya kuhlala bekulungele ukuncama yonke into ngenxa yosapho lwabo. Isikhundla esifanayo seLanga sikwacebisa ukuba bangohlobo olungenisiweyo abafuna ukukhuselwa.
Akunakwenzeka ukuba bajongane nobunzima behlabathi langaphandle ngokwabo. Ngelixa bafuna ukukhuliswa, ukuzinakekela kubaluleke kakhulu kwindlela abakhula ngayo kunye nokuqokelela inkalipho eyimfuneko yokujongana nehlabathi okanye yokuziveza.
Kungenxa yoko baya kuhlala befuna iqabane elibenza bazive bekhuselekile kwaye bethandwa. Iimvakalelo zabo ziya kuthwala iimpapasho zobuntwana babo kwaye batshintshe ukusuka apho.
Ngelixa abantu abanokunye ukubekwa kusapho lweLanga kusabalulekile, kwabo baneplanethi kwi-4thindlu yeyona nto. Bayinika ukubaluleka kakhulu njengabantwana, bethelekisa yonke into abayibonayo ngaphandle nendlela izinto ezenzeka ngayo ekhaya.
Baye bafumana ukufana kwaye babacinga njengoloyiso, okanye bagqiba ezinye izinto eziphikisana neendlela abazi ngazo kusapho lwabo kwaye boyikiswa.
Yonke into ebakhumbuza abazali babo kunye nobuntwana ibenza bonwabe kwaye babe neemvakalelo. Ukuba banamava amabi ekhaya, kunokuba nzima kancinci kubo ukuba baqonde ubomi kwaye bamkele izinto ezithile ezahluke kakhulu kwinto abaziqhelileyo.
Inxalenye yokuqala yeLanga ngo-4thUbomi bendlu yabomnumzana bunokuba ngumzabalazo kuba ngekhe bavume ukuba izinto abaphupha ngazo akukho lula kangako ukuzifumana.
I-4thIndlu ikwangokuhla kwexesha elithile lobomi, ke izinto zabantu abanelanga labo apha zinokuqala ukubonakala zilungile emva kweminyaka engamashumi amathathu.
Xa kuziwa kubuchwephesha babo, baya kwenza umsebenzi omkhulu kwizindlu okanye kwimibutho ejongene nokusingqongileyo.
Njengoko bekutshiwo amaxesha amaninzi ngaphambili, usapho lubaluleke kakhulu kubo, kodwa ilifa labo linokuba yingxaki ukuba abahluli isazisi sabo kulo.
Nkqu neepateni zookhokho babo banokulahla iindlela zabo ukuba bebengazukuveza ubuntu babo kwaye bahlule ubomi babo kubazali babo okanye kootatomkhulu noomakhulu.
Oku akuthethi ukuba kufuneka baphulukane nentlonipho yento eyanceda ukuba babe ngubani, nangona kunjalo. Ngelixa ujonge kuyo yonke indawo ukuchonga abantu kunye neemeko ezinento yokwenza nemvelaphi yabo, banokulibala yonke into abayifunayo ngaphakathi kubo.
Ukuba nekhaya elihle apho baziva bekhuselekile kwaye bekhuselekile kunokuba luncedo kakhulu kubo, kodwa izinto ezivela kwixesha labo elidlulileyo kusafuneka zibekho ebomini babo.
Usapho lubanika injongo, ke utshintsho kunye nabathandekayo babo kunye nobudlelwane ekhaya bunokubachaphazela ngendlela enkulu.
Umzekelo, baya kuhlala bekhalaza emva kokuba abantwana babo begqibe kwelokwakha obabo ubomi. Bafuna ukhuseleko kwaye baxhaswe ngokweemvakalelo, abakahlali bonwabile yile nto sele benayo.
Ukufumana kunye nokubambelela, aba bantu bafuna ukuxelelwa ukuba wonke umntu uyabathanda njengoko bengenako ukuzimela kwaye bexhalabile kakhulu ukuba usapho lwabo alunamathelanga kubo.
indoda ye-taurus ebhedini kunye nomfazi wepisces
Kufana nokungabathembi abanye, nto leyo enokusokolisa iqabane labo kunye nabantwana babo. Xa iLanga kwi-4thIndlu ihlupheke ngandlela thile, banokuzingca ngelifa labo kwaye baneengxabano ezininzi nabazali babo, ngakumbi utata kuba iLanga limele icala lotata.
Kwakhona kunokwenzeka ukuba balawule kakhulu ekhaya, kodwa inyani yokuba bayakhulisa ayinakutshintshwa okanye ifuthe kuso nasiphi na isikhundla seeplanethi.
Ukuhamba kweeplanethi kunye neempembelelo zazo ukusuka ku-A kuye ku-Z
INyanga ngeMpawu - Inyanga Umsebenzi weenkwenkwezi utyhiliwe
Inyanga ezindlwini - Ithetha Ntoni Ubuntu Bakhe
Iimpawu eziPhakanyisayo- Oko kuthethwa nguMsindisi wakho Ngawe
UMars kwiNdlu ye-12: Ibuchaphazela njani uBomi boBuntu kunye noBuntu
Ukuhambelana kobuhlobo beSagittarius kunye neCapricorn
loluphi uphawu ngoNovemba 14
9/17 uphawu lwe zodiac
10/18 uphawu lweenkwenkwezi
Inkwenkwe ye-aquarius kunye nentombazana yegemini
I-taurus horoscope kaJulayi 2015
yintoni uphawu lwedisemba 21 zodiac
ukuthandana umntu libra iingcebiso